Ufumanise ukuba sesichengeni kwenkqubo yokhuseleko WPA2 WiFi | IPhone iindaba
Umngcipheko ofunyenwe kwi-WPA2 WiFi protocol yokhuseleko
Akukho mntu okanye akukho nto igcinwayo kwiimpazamo okanye ukuba sesichengeni kwaye kule meko sijongane neyona nto ibalulekileyo umgaqo wokhuseleko WPA2 esetyenziswa namhlanje zizo zonke imizila, ii-smartphones, iikhompyuter kunye nezinye iimveliso ezikhoyo zisengozini enkulu emva kokufunyanwa kolu bungozi.
Kule meko, akukho nanye kwiimveliso ezikhoyo ezigciniweyo kuba le yinkqubo yokhuseleko esebenza kuzo zonke izixhobo ezikhoyo, nokuba yi-iOS, i-MacOS, i-Android okanye iWindows. Ukongeza, ukusilela okufunyenwe ngumfundi kwezokhuseleko kwikhompyuter, Mathy Vanhoef, ibonisa ukuba nawuphina umgculeli unakho ngokuzolileyo ubone konke ukukhangela umnatha ngendlela elula.
I-WPA2 protocol esetyenziselwa ukukhusela uninzi lwezixhobo ezingenazingcingo kunye neenethiwekhi. Kule meko kunye nokuqinisekisa ukuba obu bungozi bukhona kwaye bunokubaluleka kubo bonke abasebenzisi, baphuhlise "UKRACK", mfutshane Uhlaselo olungundoqo lokufaka kwakhona kwaye oko kubonisa ukuba ingxaki iyinyani kwaye inzima. Olunye unxibelelwano sele lukhutshiwe lunyanzelisa ukuba iziphumo zophando ngobu bungozi ziyinyani ngokupheleleyo kwaye ke kufanelekile ukuba ilungiswe le ngxaki yezokhuseleko ngokukhawuleza.
Kuyingozi, kodwa musa ukuphakuzela
Into yokuqala ekufuneka uyiqaphele kukuba le mpazamo yezokhuseleko ivumela ukubhaliswa kwawo wonke umxholo kwaye ke ngoko Imalunga "nokuhlola" ukugcwala kwabantu kwinethiwekhi. Kwaye kwelinye icala, kufuneka silumkise ukuba sijamelene nengxaki eza kuthi isonjululwe kungekudala kusetyenziswa indawo yokhuseleko eya kuthi ikhutshelwe kuzo zonke izixhobo ngokuzenzekelayo, imizila kunye nezinye iimveliso ezibandakanyiweyo, ukuze wehlise umoya. Nangona kunjalo, kulungile ukuba ujonge amaxesha ngamaxesha unxibelelwano kwinethiwekhi ye-router yethu ukubona ngakumbi ezo zithumela idatha.
Kunika umdla ukuqaphela ukuba ukuze ufikelele kobu buthathaka ukufikelela emzimbeni kuyafuneka kwikhompyuter yethu, I-smartphone, ithebhulethi, njl., kuba kunzima ukusichaphazela. Ukuba oku kuyenzeka, inokusetyenziselwa ukucacisa ukugcwala kwenethiwekhi, ubeke umxholo kutrafikhi yethu yesiqhelo kwaye ufumane idatha yobuqu kunxibelelwano apho kufuneka singene ngegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Umngcipheko ofunyenwe kwi-WPA2 WiFi protocol yokhuseleko
I-Apple Park iqukumbela iinkcukacha zayo ngokwakhiwa kweenkundla nasekuvulekeni kweendlela
I-Devolo Gigagate, ibhulorho ye-WiFi efikelela kwi-2 Gbit / s yazo zonke izixhobo zekhaya [Hlaziya]